LEGOLAND Windsor မှထုတ်ဖော်ပြသထားသော MYTHICA Sky Lion ၆၀၀,၀၀၀ ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
13 / 03 / 2021 13 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 979 Views စာ0မှတ်ချက် တည်ဆောက်, Chimera, Lego, ဥပဒေ, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, ခြင်္သေ့သည်, မာစတာမော်ဒယ်ဆောက်, ဒဏ္.ာရီ, ဝင်ဆာ
အဆိုပါ LEGOLAND ဝင်ဆာ မကြာမီတွင် Resort သည် အပိုင်းအစအဖြစ် Sky Lion တည်ဆောက်မှု 600,000 ပါရှိသည်။art MYTHICA ၏ချဲ့ထွင်မှုနှင့်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသရန်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုပြသနေသည်။
မှာအသင်း LEGOLAND ဝင်ဆာ မကြာသေးမီက အပန်းဖြေစခန်း၏ အကြီးမားဆုံးမော်ဒယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ဆွဲဆောင်မှုအသစ်များစွာရှိသည့်အနက်မှ 2021 ခုနှစ်အတွက် မြေယာအသစ်ဖြစ်သော MYTHICA အတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များကို မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Maximus the Sky Lion သည် MYTHICA ၏စီးနင်းမှုသစ်၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယူကေတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရရန် guests ည့်သည်များကိုကူညီရန် Maximus သည်သူ၏အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဘုန်းအသရေအားလုံး၏အပြင်ဘက်တွင်ရပ်နေလိမ့်မည်။
Maximus the Sky Lion နှင့်တွေ့ဆုံပါ @LEGOANDWindsor.
သူက ၆၈၅,၅၃၀ နဲ့လုပ်တယ် Lego အုတ်နှင့်အလေးချိန် 1,520kg! မင်းရဲ့အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်တွေအရမင်းကိုမေမေကုန်ကတည်းက Mythica မှာမင်းတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။#FridayFeeling #WindsorIsWinging ကိုစောင့်နေပါတယ် pic.twitter.com/wXq4ab0sHy
- Windsor သို့သွားပါ (@visitwindsor) မတ်လ 12, 2021
Visit Windsor ၏တွစ်တာအကောင့်သည်မကြာသေးမီကပုံစံ၏တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသသည့် timelapse ဗီဒီယိုအားဝေမျှလိုက်သည်၊ ၎င်းသည်အပိုင်းအစ ၆၈၅,၅၃၀ နှင့်အလေးချိန် ၁၅၂၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်သူ ၁၅ ယောက်သည်အဆောက်အအုံ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်နာရီ ၃၀၀၀ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကြီးမားသောအရွယ်အစားပင်တောင်ပံသတ္တဝါ၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။
သင်ဤပုံစံကိုပခုံးများပေါ်တွင်ဖြတ်တောက်ထားပြီးအတောင်ပံများအနား မှနေ၍ ထွက်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တည်ဆောက်မှုကိုပျံသန်းသည့်ပြဇာတ်ရုံ၏ဆွဲငင်မှုအပြင်ဘက်တစ်ဝက်တွင်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်အတောင်ပံများသည်အဆောက်အအုံကိုဖြတ်ပြီးပျံသွားသည်။
LEGOLAND ဝင်ဆာMYTHICA မြေနေရာသည် မေလ ၂၉ ရက် သို့မဟုတ် အစိုးရ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ ချဲ့ထွင်မှုတွင် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအပါအဝင် ဒဏ္ဍာရီလာအသစ်နှင့် အဟောင်းနှစ်မျိုးစလုံး၏ ကြီးမားသောပုံစံများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Chimera.
← 40371 စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောအီစတာဥကို ၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင်၏ NINJAGO အတွင်းကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးရန် LEGO အသစ်တစ်ခု City ပြသ →